» सामाजिक संजालमा एकाएक रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीको १ महिना भित्र टाउको काट्छु भन्दै एक युवा लाइभ आए ! किन यसो भन्दै छन ? आखिर को हुन उनी ? भिडियो हेर्नुहोस,,, सक्दो शेयर गरौं सामाजिक संजालमा एकाएक रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीको १ महिना भित्र टाउको काट्छु भन्दै एक युवा लाइभ आए ! किन यसो भन्दै छन ? आखिर को हुन उनी ? भिडियो हेर्नुहोस,,, सक्दो शेयर गरौं – हाम्रो खबर
सामाजिक संजालमा एकाएक रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीको १ महिना भित्र टाउको काट्छु भन्दै एक युवा लाइभ आए ! किन यसो भन्दै छन ? आखिर को हुन उनी ? भिडियो हेर्नुहोस,,, सक्दो शेयर गरौं
2021, January 1st, Friday
admin 807 Views
काठमाडौं । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ताको नामबाट आफूलाई चिनाएका ज्ञानेन्द्र शाही अहिले खुव चर्चामा छन । भ्रष्टाचारीको जरो उखेल्ने उद्देश्यले हिँडेका ज्ञानेन्द्र अनेकौं पटक कुटपिट तथा कयौं पटक जेल समेत गएका छ्न ।
नेपालमा ब्याप्त भ्रस्टाचारीको अन्त्य गर्ने सपना बोकेर हिँडेका शाहीलाई बिरोध गर्ने पनि थुप्रै भेटिन्छ !त्यस्तै यता अर्का टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने पनी नेपालमा उत्तिकै चर्चीत छन ।
कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संगबाट चर्चा चुलिएसंगै उनलाई नचिन्ने मानिस नेपालमा भेट्न गार्‍हो पर्दछ ।साना केटाकेटी,युवा-युवती देखि लिए बुढाबुढी सम्मले उनको काम’को प्रसंसा गर्दछन ।
उनको नीडर र साहासिक स्वभावले धेरैको मन जितेको छ । पछिल्लो समय उनलाई गिर्‍हाउने निकै ठुला प्रयासहरु पनि भए तर रविको सामु सबै प्रयासहरु विफल भइरहेका छ्न ।तरपनि यी दुवै व्यक्तिको प्रसंसक भने आम नेपाली जनता रहेका छन । तर पछिल्लो समय उनेहरुलाई नराम्रो भन्ने केहि मानिसहरु भेटिएका छ्न ।
भर्खरै मात्र विदेशमा बस्ने एक नेपाली युवकले उनीहरूलाई तथानाम भन्दै गाली गरेको भिडियो सामाजिक संजाल भाइरल नै बनेको छ ।